10 | March | 2013 | Danya Wadi
NLD-ပါတီရဲ့ နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာညီလာခံကို ပြည်ထောင်စု ကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီက တက်ရောက်ခဲ့ ….
By danyawadi March 10, 2013 Leaveacomment
တိုင်းပြည်တိုးတက်ရေးအတွက် ပါတီတိုင်းကို မိတ်ဖက်ပါတီအဖြစ် သဘောထားကြောင်း ဦးဌေးဦးပြော 2013-03-10 NLD ပါတီရဲ့ နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ညီလာခံကို ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီက တက်ရောက်ခဲ့တာဟာ တိုင်းပြည် တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် ပါတီတိုင်းကို မိတ်ဖက်ပါတီအဖြစ် သဘောထားတဲ့ အတွက် သွားရောက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနဲ့ ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ ဒုတိယ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဋ္ဌေးဦးက ပြောကြားပါတယ်။ ဒီကနေ့ နေ့လည်ပိုင်းက ရန်ကုန်မြို့၊ ဗဟန်းမြို့နယ်၊ ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ ရုံးခန်းမှာ ကျင်းပတဲ့ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာ ပြောဆိုလိုက်တာပါ။ ဒါ့အပြင် (၂၀၁၅) ခုနှစ် ရွေးကောက်ပွဲမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် သမ္မတ ဖြစ်နိုင်ကြောင်း ဦးဌေးဦး ပြောခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ အင်တာနက် မီဒီယာတွေပေါ်က သတင်းတွေဟာလည်း မဟုတ်မှန်ဘူးလို့ တုံ့ပြန် ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ (၁၉၉၃) ခုနှစ်ကတည်းက လူမူရေးအသင်းအဖွဲ့တစ်ခုအဖြစ် […]
NLD ပါတီ ဗဟိုအလုပ်မှုဆောင်ကော်မတီဝင်များ။ (မတ်လ ၃ ရက်၊ ၂၀၁၃)။ ကိုကျော်ကျော်သိန်း 10.03.2013 အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD ရဲ့ နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ပါတီညီလာခံ ကနေ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် ရွေးချယ်လိုက်ပါတယ်။ ဒါဟာဖြင့် NLD မှာ ပါတီခေါင်းဆောင်ပိုင်း တာဝန်ယူမယ့်သူတွေ ကို ပါတီဝင်တွေက အဆင့်ဆင့် ရွေးချယ် တာဝန်ပေးတာ ပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ပါတယ်။ နှစ်ရက်ကြာကျင်းပခဲ့တဲ့ နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ပါတီညီလာခံမှာ ပါတီ ခေါင်းဆောင်တွေ ကို ရွေးချယ်ခဲ့တာ နဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပြောဆိုခဲ့တာတွေကို ကောက်နှုတ် စုစည်းပြီး ကိုကျော်ကျော် သိန်းက တင်ပြထားပါတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်း ၂၀ ကျော်မှာ NLD ပါတီကို စတင်ထူထောင်ခဲ့ကတည်းကဆိုရင် အခုကျင်းပတဲ့ နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ပါတီ ညီလာခံဟာ […]
ဦးသီဟစော ဦးသန်းလွင်ထွန်း 24.02.2013 ဒီတပတ် မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီရေးရာ ဆွေးနွေးခန်းမှာ မြန်မာနိုင်ငံမှာ စာပေစီစစ်ရေးဆင်ဆာအဖွဲ့ ဖျက်သိမ်းလိုက်ပြီမို့ ပုံနှိပ်မီဒီယာလောကမှာ အတော်အတန် လွတ်လပ်လာပြီလို့ ဆိုပေမယ့် ရေဒီယို၊ ရုပ်မြင်သံကြားအပါအဝင် တခြားကန့်သတ် ဥပဒေတွေနဲ့ ထုတ်ဝေခွင့် မှတ်ပုံတင်ကိစ္စတွေမှာ တင်းကြပ်မှုတွေ ရှိနေသေးတယ်လို့ မြန်မာသတင်းအယ်ဒီတာချုပ် ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးက ပြောပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံ သတင်းစာဆရာများအသင်း ဒုတိယ ဥက္ကဋ္ဌတဦးလည်းဖြစ်တဲ့ ဦးသီဟစော ကို ဗွီအိုအေ က တွေ့ဆုံမေးမြန်းထားပါတယ်။ ဦးသီဟစော ။ ။ အကုန်လုံး လွတ်လပ်ခွင့် ပြုလိုက်ပြီလို့တော့ မပြောနိုင်သေးဘူး။ ကျနော်တို့ အခု print media တွေ။ ခါတိုင်းဆိုရင် ထုတ်နေကြတဲ့ မဂ္ဂဇင်းတွေ၊ ဂျာနယ်တွေ၊ လုံချင်းတွေ ပုံနှိပ်မီဒီယာက လူတွေကတော့ ဆင်ဆာမရှိတာကြောင့်မို့ […]
NLD-ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင် သစ်များဖြင့် ရှေ့ဒီမိုကရေစီ ခရီးဆက်မည် …
မြစ်မခ by Myit Makha Mediagroup on 10 Mar, 2013 NLD ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်သစ်များဖြင့် ရှေ့ဒီမိုကရေစီ ခရီးဆက်မည်မတ်လ ၁၀ရက်နေ့ နံနက်ပိုင်းမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည် အပါအ၀င်ဗဟိုအလုပ် အမှုဆောင်အဖွဲ့သစ်ကို ရွေး ချယ်ပြီး NLD ရှေ့ခရီးလမ်းဆက်မည်ဖြစ်ကြောင်း ဥက္ကဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ပြောသည်။ ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်များအနေဖြင့် ၁၅ ဦး ရွေးချယ်ခဲ့ကြပြီး အရံ ၅ ဦးဖြင့်စုစုပေါင်း ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင် ၂၀ ဦးဖြင့် NLD ပါတီက ရှေ့ဒီမိုကရေစီရေးအတွက် ပီပီပြင်ပြင် ဆောင်ရွက် သွားကြ မည်ဖြစ်ကြောင်းသိရှိရသည်။ ပိတ်ပွဲ အခမ်းအနားတွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က မိန်းခွန့်ပြောကြားခဲ့သည်။`ရှေ့ဆက်ရမဲ့ လုပ်ငန်းစဉ်တွေကို ပီပီပြင်ပြင်လုပ်ဆောင်နိုင်မဲ့ သူတွေ၊အရည်အချင်းနဲ့ […]
ကမ္ဘာ့ အသက် အငယ်ဆုံး အမျိုးသမီး ကို Yahoo! ရဲ့  စီအီးအို အဖြစ် အခန့်အပ် …
Written by သုတ Marissa Mayer လို့အမည်ရတဲ့ အမျိုးသမီး ဖြစ်ပြီး အသက် ၃၇ နှစ်သာ ရှိပါသေးတယ်။ ၂၀၁၃ ခုနှစ်မှာပဲ Yahoo! ရဲ့  စီအီးအို အဖြစ် အခန့်အပ် ခံရပါတယ်။ Yahoo! မတိုင်မီက ၁၉၉၉ ခုနှစ်ကစလို့ Google မှာ စတင် လုပ်ကိုင်ခဲ့ သူ ဖြစ်ပါတယ်။ Google ရဲ့  အယောက် ၂၀ မြောက်ဝမ်းထမ်း၊ ပထမဦးဆုံး အမျိးသမီးအင်ဂျင်နီယာ ဝန်ထမ်းအဖြစ် လည်း အသိ အမှတ်ပြု ခံခဲ့ရပါတယ။် Google မှာတုန်းကလည်း လုပ်သက်ရှည်ပြီး အရေးအကြီးဆုံး ခေါင်းဆောင် ပုဂ္ဂိုလ်များ စာရင်းထဲမှာ ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ တကယ်လည်း လုပ်ကိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါကြောင့် […]
ဆီးကို ဓာတ်ပုံရိုက်၍ စစ်ဆေးနိုင်မည့် iPhone App ထွက်ရှိ
Written by သုတ ရောဂါများကို ရှာဖွေကုသရာတွင် အဓိကကြသည့် ရှာ ဖွေစစ်ဆေးမှု တစ်ခုဖြစ်သော ဆီးစစ်ခြင်းအား ယခုအခါ လွယ်ကူစွာပြုလုပ်နိုင်မည့် စနစ်တစ်ခု ပေါ်ထွက် လာခဲ့ပြီး ယင်းမှာဆီးကို ဓာတ်ပုံ ရိုက် ၍ စစ်ဆေးနိုင် မည့် iphone Application သစ်ဖြစ်ကြောင်း နည်းပ ညာသတင်းများက ဖော်ပြထားသည်။ စစ်ဆေးလိုသူ၏ ဆီးအားဓာတ်ပုံ ရိုက်ပြီးသည့်နောက် တွင် ဆီးအရောင် ပြောင်းလဲမှုကို အခြေခံကာကျောက် ကပ်၊ အသည်းစသည့် ဖြစ်နိုင်ခြေ ရောဂါအခြေအနေ များကို ရှာဖွေ ပေးနိုင် မည်ဖြစ်သည်။ ဆီးလမ်းကြောင်း ဆိုင်ရာ ကူးစက်ရောဂါများ၏ ရှေ့ပြေး အခြေအနေ များကို ရှာဖွေပေးနိုင်မည်ဖြစ်ပြီး ယခုအခါ iphone ပေါ်တွင် သာ အသုံးပြုနိုင် မည်ဖြစ်သော် […]
၂၀၁၂-ခုနှစ်အတွင်းကမ္ဘာ့ဒေသ အလိုက်တွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သော ထူးခြားဖြစ်စဉ်များ …
၂၀၁၂ ခုနှစ် အတွင်း ကမ္ဘာ့ဒေသအလိုက်တွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သော ထူးခြားဖြစ်စဉ်များ Tuesday, Mar 05 2013 နိုင်ငံ တကာတွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သော ထူးခြား ဖြစ်စဉ်များ တောင်အမေရိက ဒေသအတွင်း ဖြစ်ပွားခဲ့သော ထူးခြားဖြစ်စဉ်များ မြောက်အမေရိက ဒေသအတွင်း ဖြစ်ပွားခဲ့သော ထူးခြား ဖြစ်စဉ်များ အာဖရိက ဒေသအတွင်း ဖြစ်ပွားခဲ့သော ထူးခြား ဖြစ်စဉ်များ အနောက် ဥရောပ ဒေသအတွင်း ဖြစ်ပွားခဲ့သော ထူးခြား ဖြစ်စဉ်များ အရှေ့ဥရောပ ဒေသအတွင်း ဖြစ်ပွားခဲ့သော ထူးခြား ဖြစ်စဉ်များ အရှေ့ အလယ်ပိုင်း ဒေသအတွင်း ဖြစ်ပွားခဲ့သော ထူးခြား ဖြစ်စဉ်များ အာရှ- ပစိဖိတ် ဒေသအတွင်း ဖြစ်ပွားခဲ့သော ထူးခြား ဖြစ်စဉ်များ အလယ်အာရှ ဒေသအတွင်း ဖြစ်ပွားခဲ့သော […]